Waxaan kula talin lahaa xukuumadda Somaliland inay xayiraad saarto labada laamood ee BBC-da iyo VOA-da. W/Q Mohammed Abdi Hassan Diridhaba - Wargane News
Home Somali News Waxaan kula talin lahaa xukuumadda Somaliland inay xayiraad saarto labada laamood ee...
Waxaan kula talin lahaa xukuumadda Somaliland inay xayiraad saarto labada laamood ee BBC-da iyo VOA-da.
Labada laamood waxay caadaysteen dagaal qarsoon oo aan gabasho lahayn oo ay Somaliland ku hayaan, xita layaabka iyo fajaca ay arrintani leedahay waxay tahay, iyagoo warar khaldan oo aan jirin u gudbiya laamaha kale ee mataanaha yahiin sida ingiriisiga.
Jamhuuriyadda Somaliland maaha dal iskii ugu dhawaaqay gooni u goosad (cessation), haddaad macnaha kelmadda (cessation) loo rogo luuqadda loo isticmaalo siyaasadda xidhiidhka caalamiga ahi waxay la mid tahay jabhad goob ka mid ah dal gooni u xukunta, kana go’an nidaamka dawliga ah ee dalka intiisa kale.
Dastuurka qaramada midoobay (The UN charter) qodobkiisa, 1-aad, faqradiisa 1-aad ee ka hadlaysa in ummaddahu aayahooda ka tashan karaan (nations self determination) ayaa waxay u dhigantahay sidani a) ummad kasta oo meel ku wada dhaqan iskuna af garata inay iyadu dhexdeeda aayahooda ka tashadaan, waxay xaq u leeyahiin inay yahiin ummad jirta oo xaq u leh jiritaan.
2. Sida xeerka caalamiga ah qeexayo, shuruudaha dal jira loo aqoonsan karo waa afar shuruudood 1) inuu leeyahay tiro cayiman oo dad ah 2) inuu leeyahay dhul badeed oo cayiman oo la yaqaano (defined territorial border) 3) in nidaam dawladnimo iyo kala danbayn ka jiraan 4) inaanu khatar ku ahayn nabadda iyo xasiloonida dunida.
Laanta afka Soomaaliga ee BBC-du waxay ku kacday danbi weyn oo ay ka gashay xeerka caalamiga ah, iyadoo Somaliland kala mid dhigtay sida jabhadda Plosario ee ka dagaalanta saxaraha galbeed ee Afrika.
Kelmadda cession (qasab gooni u goosad) ama iskeed u go’day ee ay u isticmaalan Somaliland, waxaa loo isticmaala jabhad goobaha ay ka talinayso dadka xoog ku haysata, isla markaana dadka goobta ay xukumaan aanay raali ka ahayn.
Xukuumadda Somaliland gaar ahaana wasiirka warfaafinta Somaliland Mudane Cabdiraxmaan guri Barwaaqo waxaan usoo jeedinaya kana codsanaya inuu ruqsadda kala laabto laanta Afka Soomaaliga ee idaacadda BBC-da ilaa intay saxayaan magaca Jamhuuriyadda Somaliland.
Ceeb ayey ku tahay Jamhuuriyadda Somaliland dawladeeda, shacabkeeda iyo qaranimadeedaba, in cid ku dafirsan aad u ogolaato inay dalkaaga si bilaa shuruud ah uga shaqeeyan.
Laanta Afka Soomaaliga ee Idaacadda VOA-du waxay la mid noqotay sida idaacadda Radio Muqdisho, waxaanay jabiyeen heshiiskii lagu dhisay laantaasi, oo ahayd in dadka ku nool ama ku dhaqan geeska Afrika ee ku hadla luuqadda Soomaaliga ay wararkooda si isle’eg usoo gudbiso, waxaan goor dhawayd qoraal email ah u diray xafiiskooda qaabilsan dacwadaha gudbinta wararka (coverage desk).
Wasaaradda warfaafinta Somaliland waa inay si dhab ah oo xilkasnimo badani ka muuqato, ula xisaabtanta labadani laamood, haddii kale xaalkoodu marka danbe faraha ayuu ka bixi doona
Deg-Deg: Wasiirka Waxbarashada Ee Cusub Oo Arrimo Culus Sheegay Oo Sheegay Arrin Xasaasi Ah + Muuqaal